12 Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke
Uma amatshe ethempeli lasendulo ayekwazi ukukhuluma, babezokhuluma ngempucuko yasendulo, ukuhlasela, amasiko, kanye nothando. I 12 Amathempeli Amaningi Asendulo Emhlabeni Wonke alondolozwe kahle futhi ayahlaba umxhwele ngobuhle nesithombe esiqoshiwe. Ukusuka emathempelini kaFaro eGibhithe kuya emathempelini amaBuddha namaHindu eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, lamathempeli amadala angamagugu omlando.
1. Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke: Isigodlo saseKnossos
Indawo yokukhulekela kanye nesikhungo sempilo yezepolitiki ngesikhathi seBronze, Isigodlo saseKnossos singelinye lamathempeli amadala kakhulu emhlabeni wonke. Ithempeli laseKnossos laliyisikhungo sempucuko yamaMinoan eKrethe. Ngaphezu kwalokho, ithempeli lasendulo lingelinye lamathempeli agcinwe kahle kakhulu emhlabeni.
Ithempeli lokuqala laseKnossos lakhiwa kulo 1900 BC entabeni, kodwa okunye kokuzamazama komhlaba okuningi kwaseKrethe kwawubhubhisa. Nokho, ngemva kwalokho kwakhiwa elinye ithempeli futhi labhujiswa ngokuqhuma kwentaba-mlilo. Ngakho, ithempeli laseKnossos elimile namuhla yilona 3rd ithempeli kusukela 1375 BC. Ithempeli laseKnossos lingenye ye izindawo eziphezulu zamaqhawe omlando nezinganekwane zayo ezinsalela.
Predating Stonehenge by 6,000 iminyaka, amatshe aseGobekli eningizimu-mpumalanga yeTurkey kukholakala ukuthi ayizinsalela zethempeli lokuqala emhlabeni. I 11,000 amatshe aseGobekli Tepe eminyaka ubudala ayeyindawo yokukhulekela egqumeni.
Nokho, akukho okutholakele ngokuhlaliswa kwabantu esifundeni, kodwa indawo yayiyiphuzu ohambweni lwabazingeli abaningi abayimizulane nabaqoqi. Ngakho, ithempeli laseGobekli Tepe laliyindawo engcwele, ngokubaluleka kwezenkolo.
3. Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke: Hagar Qim
Kwenziwe nge 20 amathoni megalith itshe phakathi nendawo, ithempeli likaHagar Qim lingelinye lamathempeli ahlaba umxhwele kakhulu emhlabeni. Ngakho, UHagari Qim futhi uyithempeli elijwayelekile elivela ku-Malta Prehistoric.
Esinye sezici ezingajwayelekile ethempelini likaHagar Qim imbobo emise okweqanda kwelinye lamakamelo amabili.. Ngosuku lokuqala lwehlobo, imisebe yelanga idlula kulo mgodi bese ikhanyisa isigxobo setshe. Ungavakashela uHagari Qim ohambweni lwakho lokuya eMalta, futhi ujabulele enye ye 12 amathempeli amadala kakhulu emhlabeni.
4. Amathempeli Asendulo Emhlabeni Wonke: Ithempeli laseSeti
Ilondolozwe kahle kakhulu, iThempeli likaSeti livela ebukhosini beshumi nesishiyagalolunye. Ithempeli laseSeti liyindalo kaSeti nendodana yakhe uRamses II. Ubaba waqala indalo, indodana iqeda imihlobiso namagceke nxazonke zalo.
Namuhla, ungavakashela iThempeli laseSeti, kwi uhambo day kusuka eCairo. Uma ulapho kufanele unake i-Abydos graffiti ezindongeni zethempeli.
5. Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke: Ithempeli le-Hypogeum
Ithempeli elingaphansi komhlaba lakudala kakhulu emhlabeni liyithempeli eligcinwe kahle kakhulu laseHypogeum eMalta. Ithempeli elimangalisayo 6,000 ubudala, 3 amazinga ithempeli lasendulo lamakamelo axhumene.
Ithempeli laseHypogeum ekuqaleni laliyindawo yokukhulekela nokuthandaza, kodwa kamuva ithempeli lasendulo laguqulwa laba indawo yokungcwaba. Izivakashi zingancoma imidwebo ebomvu ezindongeni, okuwukuphela kwemidwebo yangaphambi komlando eziqhingini zaseMalta. Ngaphezu kwalokho, ungabona izinto ezikhethekile ezitholakala ethempelini eValletta Museum.
6. Ithempeli laseLuxor
Njengoba uhamba emakamelweni ethempeli laseLuxor, ubuyela emuva emakhulwini eminyaka omlando. Zonke izinyathelo zikubuyisela emuva eminyakeni engu-Ramses II, kanye nempilo yenkolo yaseGibhithe lasendulo.
Ithempeli laseLuxor linokubaluleka okukhulu enkolweni yaseGibhithe lasendulo. Ngaphezu kwalokho, kusethempelini laseLuxor lapho uNkulunkulu u-Amoni azalelwa khona kabusha phakathi nokugcotshwa kukaFaro kwaminyaka yonke..
7. Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke: Stonehenge
Umbuthano wamatshe omkhulu ungenye yezimfihlakalo ezinkulu zomlando emhlabeni. U-Stonehenge uyaziqhenya e-Wiltshire, England. Iheha amakhulu ezivakashi ukuthi ziyibabaze. Ochwepheshe emlandweni kanye nezwe lemivubukulo bakholelwa ukuthi ama-druids akha i-Stonehenge.
I-Stonehenge yayingaba nezinhloso zenkolo ngezikhathi zangaphambi komlando. Esinye sezibonakaliso ukuhlelwa kwamatshe kanye neqiniso lokuthi isikhumbuzo sibheke ekuphumeni kwelanga. Yize kungakacaci ukuthi la matshe amakhulukazi alethwe kanjani kule ndawo ethile e-England, I-Stonehenge ingelinye lamathempeli athandwa kakhulu ukuvakashelwa emhlabeni jikelele.
8. Amathempeli e-Ggantija
I-Ggantija yasendulo eMalta ivelele phakathi 12 amathempeli amaningi asendulo emhlabeni wonke. Lokhu kungenxa yokuthi iyinkimbinkimbi enamathempeli amabili. Ngaphezu kwalokho, I-Ggantija amathempeli athola igama lawo ngenxa yamatshe amakhulu abawakhayo.
Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kokuvakashela elinye lamathempeli amakhulu emhlabeni wonke, ungase uhambe etsheni lesikhumbuzo elidala kunazo zonke emhlabeni.
9. Amathempeli Asendulo Emhlabeni Wonke: Ithempeli lika-Amada
Amathempeli aseGibhithe adume emhlabeni wonke ngobukhulu bawo obuhle, kanye nomklamo. Amathempeli aseGibhithe aziwa ngokuba amathempeli amahle kakhulu emhlabeni jikelele. Ngenxa yama-hieroglyphs nemifanekiso ezindongeni, iThempeli lase-Amada alihlukile ngobuhle.
Encane, nokho i-Amada Temple ehlaba umxhwele inezithombe ezinhle kakhulu ezindongeni. Imibhalo yabelana ngezenzakalo ezibalulekile emlandweni waseGibhithe njengokuhlasela kwe-Lybian eGibhithe. Ngakho, uma ufisa ukuvakashela amathempeli amadala eLake Nasser, pakisha izikhwama zakho bese uqonda eNubia.
10. Ithempeli le-Mundeshwari Devi, I-Bihar
Ithempeli lamaHindu elidala kunawo wonke emhlabeni, ithempeli laseMundeshwari liseKaimur. Encane, kodwa ihlaba umxhwele ekuqoshweni kwamatshe, ithempeli liwuphawu lweNkosi uShiva noShakti. Abavakashi eThempelini laseMundeshwari bangabuka izithombe eziqoshiwe zesikhathi samaGupta kanye nempilo emuva 625 BC.
Ithempeli elihle lise-Mundeshwari Hill, lapho kuye kwatholakala ezinye izinsalela eziningi ezibalulekile. Uma uthathekile ngomlando wamaHindu, kufanele uvakashele Mundeshwari Temple. Uzothola okwengeziwe mayelana nezimpawu zeNkosi Shiva kanye noShakti abahlala ndawonye endaweni eyodwa ekhethekile.
11. Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke: Borobudur Indonesia
Ithempeli laseBorobudur e-Indonesia lidume ngokuba ithempeli elikhulu lamaBuddha emhlabeni. Namuhla amaBuddha amaningi avakashela ithempeli laseBorobudur ohambweni olungcwele esiqhingini saseJava.
Uma uvakashela eBorobudur Temple, uzomangala ukubona 56,000 cubic metres wetshe lentaba-mlilo elimpunga elakha leli thempeli lamaBuddha.
12. Ithempeli laseHatshepsut
Ngcwelengcwele, ithempeli likaHatshepsut lisuka ekhulwini le-18. UFaro Hatshepsut wakha ithempeli emaweni aseDeir El-Bahri, kanjalo ubuso bethempeli bubhekene namawa’ landscape ingenye ehlaba umxhwele kakhulu emhlabeni.
Ithempeli lasendulo lisukela enkathini yoMbuso Omusha, kodwa ngokuhamba kweminyaka ithempeli lashintsha inhloso yalo lisuka ekubeni yithempeli laba isigodlo sezindela. Deir El-Bahri kusho “I-Northern Monastery”, futhi kukhona ngisho nesonto ngaphakathi emagcekeni eThempeli Hatshepsut.
Thina ku Londoloza Isitimela uzokujabulela ukukusiza uhlele uhambo lokuya kulezi 12 Amathempeli Asendulo Amaningi Emhlabeni Wonke.
Uyafuna ukushumeka iposi lethu lebhulogi elithi “Amathempeli Asendulo Ayi-12 Amaningi Emhlabeni Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fmost-ancient-temples-worldwide%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i/fr iye ku/pl noma/de nezinye izilimi.